Qeerroo Bilisummaa Oromoo Dodolaa irraa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroo Bilisummaa Oromoo Dodolaa irraa.
Hagayya 2 /2020
Erga oromoo fi oromiyaan sirna kolonii habashaa jalatti kuftee kaasee oromoonis falmaa hin dhiifne, diinni gabrummaa nurratti dheerffachuuf jecha tooftaan inni hin fayyadamne hin jiru. Tooftaalee diinni dhimma itti bahu oromoma wal dura ittiin dhaaban hedduu keessaa tokko amantiin adda qooduu yaala.
Ta’us shiraa fi sharriin akka kiyyootti baroota dheeraaf nuuf kiyyeessaa ture tasuma ummata oromoo duuyda walitti gara galchee milkeeyeefii hin beeku.
Amantiin kan dhuunfaati oromummaan kan walooti jedhee irbuu oromummaa qaarriffaan qabatee qabsoo isaa qarqara bilisummaa fi Walabummaa oromiyaatiin gayee jira.
Ummanni oromoo dhibdee diinonni keessaa fi alaan isarratti godhan dhiibee tokkummaan harka wal qabatee argamuun diinaaf naasuu ta’e.
Naasuu kanarraa kan ka’e beekaa oromoo hidhuu fi ajjeesuu cinaatti ummata oromoo addaan qoodanii tarsiimoo kolonii dheerffachuuf abjuu hirriiba malee abjaa’aa jiru.
Akkuma beekamu erga ajjeechaa artistii keenna kabajamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatanii kaasee ummanni oromoo bakka hundaa waan itti ka’eef humna ummataa kana sodaachuurraa kan ka’e taappellaa isaanii ka dhuma hin qabne san ummata oromootti maxxansuu akka eegalan Qeerroo Bilisummaa Oromoo magaalaa dodolaa fi naannawa ishee jiraniif ifaadha.
Haaluma kanaan dhiheenna kana kaabineen PP waraana mootummaa waliin ta’uun halkan halkan waraqaalee adda addaa ummata keenna addaan qooduuf maqaa namootaa fi maqaa amantii dhahuudhaan magaalaa keessatti facaasaa bulan.
Keessattuu maqaa oromoota gosa tuulamaa dhayuun akka waan Oromoon sikkoof mandoo isaaniif akeekkachiisa barreessee fakkeessanii waraqaalee gara garaa facaasaa jiran.
Keessattuu guyyaa har’aa marsaa hawaasaa irratti waraqaa maqaa namoota jahaatamaa (60) qabu “akeekkachiisa qeerroo dodolaa irraa” jedhamee hafarfamu yeroo agarre gadda guddaatu nutti dhaga’ame.
Kanaaf nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo magaalaa dodolaa gochaan akkasii kun gochaa diina ummata Oromoo akka ta’ee hubachuudhaan dhaamsa armaan gadii ummata oromoo magaalaa dodolaa fi naannawa ishee jiran hundaaf dhaamna.
1/Namoonni maqaan keessan waraqaa kana irratti dhayame fi gochaan kun yeroof dhugaa isinitti fakkaate gochi akkasii kan diina ummata oromoo ta’uu hubattanii shira diinni tokkummaa keenna diiguuf nuuf qopheessaa jiru kana jaalala oromummaa walii keenna jiddutti agarsiisuu dhaan akka fashaleessinu isiniin jenna.
2/Oromoonni Tuulamaas ta’ee kan sikkoo mandoo riqicha seenaa kan rirmi nyaachuu hin dandeenye kan haaji aadam saaddoo fi J/Taaddasaa birruutiin kaleessa ijaarame sana yaadachuun waan farra tokkummaa ummata Oromoo ta’e kamuu akka ofirraa qolannu isiniin jenna.
3/yeroon amma keessa jirru kun diinaaf yeroo itti baqee dhabamu waan ta’eef boolli diinni hin qonne dhakaan diinni gara hin galchine hin jiru.
Kana kan godhuuf ofii jiraatee nu balleessuu waan barbaaduuf ta’uusaa hubattanii irree tokkummaatiin harka wal qabattanii diina deemsa shira isaaniitti akka xumura gootan isin gaafanna.
4/jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantii, hayyootni, quuqamni sabaa isinitti dhaga’amu dhimma tokkummaa sabaa diigu kana irratti ummata keennaaf utubaa taatanii akka daranuu tokkummaasaa jabeessitan dhaammanna.
5/Sabboontota poolisii, humna addaa, hokkora bittinneessaa keessa jirtan akkasumas qaamotni bifa garagaraan hawaasa kana tajaajiltan qaamota shira akkasii gidduu ummata keennaatti oofu qorattanii akka seera tti dhiyeessitan isiniin jenna.
Dhumarratti miseensonni qeerroo bilisummaa oromoo akkasumas ummanni oromoo bal’aan qaamota shira akkasii nu gidduutti uuman kana hordoffii cimaa goonee akka ummataaf saaxillu kamanumaan isin hubachiifna.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Arsii Lixaa Magaalaa Dodolaa irraa.
Ibsa Ejjannoo Hoganootaa fi Qondaalotaa ABO Biyya Ambaa.
Biyya Ethiopia, addattimmo Oromiyaa keessatti mirgi ummattootaa sarbamee ajjeechaa fi saamichi akkasumas hidhaan baroota dheeraaf geggeeffamu biyya sana gara diigumsaatti akka geessaa jiru adduunyaaf ifaa dha. Haalli kun hammaachaa deemuu irraan biyya san keessaa addatti duulli Oromiyaa fi Oromoota irratti xiyyeeffatee jiru kan bara kamiinuu caalaa hammaachaa deemuu irraa mootummaan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru dhaabota siyaasaa karaa nagaa fi democracy ummataaf nagaa hawwaa jiraatan waan fudhatama guddaa biyyatti keessatti qabaniif jecha mootummaan miseensota ABO fi hogganoota isaatti duuluun Oromiyaa keessatti hidhuu fi waajjira ABO guutummaa biyyaa keessa jiru waajjiroota 232 ol cufuun, miseensota keessa jiranis hidhuu fi bakka buutee walaalchisee jiraachuu ABOn irra deddeebi’ee beeksisee jira.
Yeroo ammaa kanammo Waajjirri ABO kan magaalaa Finfinnee Gullaallee jiru waraana
Mootummaan dhuunfatmee sakatta’amuu fi miseenotiin keessa jiranis waraana mootummaatin adamfamaa jiru. Kana irratti dabalee Hayyuu Dureen ABO sochii dhorkamee toorri quunamtii isaa kan akka bilbilaa cufamee jira. Haalli kun kan ta’es itti yaadamee fi saganteeffamee toora qunnamtii HD ABO, Jaal Dawud Ibsaa, irraa kutuun rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa jirtu hammeessa malee furmaata hin fidu. Haalli kun Yakkaa fi balaa qabaachuu qofa osoo hin taane qaama bifa kanaan shororkeessummaa gaggeessuuf yaalaa jirus itti gaafachiisa. Gatiin biyyattii baasisuuf deemu illee salphaa tahuuf hin taa’uu.Kanaafuu Qaamni kamiyyuu kana dursee hubachuun akkaan barbaachisaa dha.
Guyyaa ABOn tokko jedhee karaa nagaa kaayyoo fi sagantaa isaa ummata Oromoo fi Oromia
keessatti ifatti gaggeessuuf September 15,2018 biyya seene irraa jalqabee duullii fi danqaan bifa gara garaan mootummaan Ethiopia dhaaba kana irratti gaggessamu addaan hin citne. Dhaaba kallacha saba Oromoo wareegama ilmaan Oromoo kumaatamaan jiraachisame diina innikkaa taasisuun moggeessanii itti duulutti dabalee waggoota lamaan dabran keessa lubbuun ilmaan Oromoo dhibboota kumaan lakkaayaman itti kufanii jiran. Hogantootni, qondaalotni, miseensotni fi deggertootni ABO kumootaan lakkaayaman manneen hidhaatti guyyuu guuramaa jiran. Haala kana ABOn irra deddeebi’ee ‘gara nagaatti deebi’uu qofatu furmaata akka fiduu danda’u’ ibsaa ture. Haa tahu malee mootummaan Ethiopia karaa nagaa furmaata barbaaduu irra inumaa iyyuu HD ABO, Jaal Dawud Ibsaa humna waraanaa fi tikaan marsamee mana jireenya isaa keessatti hidhame. Toorri quunnamtiis irraa cite. Tarkaanfii waraanaa fi humna tikaatti dabalee shirri mootummaa Ethiopia, yoo danda’e ABO shororkeessuu fi facaasuuf tattaafataa jirus torbaan kana keessa caalaatti ifa bahee jira.
Osoo ABOn yakka ajjechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame qaama walaba taheen qoratamee ummata biyyaaf ifa akka tahu gaafataa jiruu, yeroo dhaabni kun ilmaan Oromoo shira siyaasaatiin hidhaman akka gadi lakkisaman falmaa jiruu, yeroo ABOn caalaatti kara itti nagaan biyyattii keessatti argamuu danda’u irratti fala barbaachisan hunda akeekaa jirutti duulli shiraan guutame bifa hundaan itti bobbaafamaa jiru kana dhaabuuf qaamni dhimmi kun ilaallatu hindi waan godhuun irra jiru akka armaan gadii kanatti akeekna.
1. Shira mooraa qabsoo Oromoo tasgabbii dhorkuuf hoogganoota kaan hidhaa fi dhabamsiisaa, HD ABO irraa qunnamtii bifa hundaa kutaa fi tika humna waraanaa jalatti eegaa shira yakkaa fi dharaatiin mooraa qabsoo Oromoo jeequuf yaaluun bifa kamiin illee dura dhaabbatamuu qaba.
2. Qabsaawotii fi Miseensotiin ABO akkasumas deggertooti qabsoo Oromoo biyya Oromiyaa irraa ala jiran akkuma tokkummaan sirnaa fi mootummaa mirga Oromoo dura dhaabbatee saba Oromoo dhabamaaf hallayyaatti dhiibaa qabsaawota Oromoo fi dhaaba hangafa akkasumas abdii Oromootaa ta’e kan akka ABO balleessuuf shira keessaa fi alaan xaxaa waan jiru akka dhaabbatuu tokkummaan akka falman dhaammaa. Mootummaan har’a biyya bulchus booru gaafatama seenaa fi seeraa jalaa waan hin baaneef gochaa isaa kana irraa dhaabbachuu akka qabu gadi jabeessinee dhaamaa, daddaffiin gaaffii ummata Oromoo alaa fi keessaa akka guutu hubachiisna.
3. Mootummaan PP qabsaawotaa miseensotaa fi hogganoota ABO daddaffiin akka hidhaa irraa gadhiisu.
4. Aktiivistootaa Oromoo wali-galaa fi hogganoota KFO hidhaa keessatti ugguree hiraarsaa jiru
haalduree tokko malee akka gadhiisu.
5. Gaazexxessitoota OMN,,ONN fi kanneen hidhaa jiran mara walaba godhee mirga
gaazexxessummaa Oromootaa akka kabaju.
6. Oromiyaa keessatti hokkora uumuuf sabaa fi sablammii jidduu jeequmsa kaasuun biyyattii gara dhabamaatti kan deemsisaa jiru, badii ofii qama biraatti haqachuun olola kijibaa hogganootii fi dabballooti Nafxanyaa/PP deemsisan mootummaan hatattamaan dhaabsisuu qaba.
7. Warri PP aadaa gooftolii isaanii TPLF irraa baraniin maqa balleessii ABO irratti deemsisan
daddaffiin dhaabuun biyya bulchuu fi ummata taliiguun qalbii fi gaarummaa bulchiisaa waan
barbaaduuf hojii kashalabbummaa dhiisanii namusa bulchiinsaa gaari akka qabaatan gadi
jabeessinee dhaamna. Mooraa qabsoo ABO fi KFO keessatti basaasota galchee qabsaawota jeequu, tokkummaa miseensotaa fi ummatichaa jeequuf yaali mootummaan gochaa turee fi itti jiru ABOn muuxannoo bara dheeraa irraa waan hubatuuf gochaa akkasii irraa dhaabbatanii gara tokkummaa fi nagaa biyyaaf yaaduu irratti akka fuulleffatamu dhaamna.
8. Mootummaan bilxiqinnaa/PPn ammaan dura ofii ergama TPLFn ummata Oromoo waggoota 27 hidhaa fi gidiraa guddaa irraan gahaa akka turan beekamaa dha. Ammas ergama sirna Nafxanyaan ulee alagaan Oromoo reebaa jiru. Waan ofii alagaan ergamanii hojjetaniif yakka mataa isaanii golguuf jecha ABOn akka farreen qabsoo Oromoo duraanii keessaattuu TPLF waliin quunamtii qabu fakkeessanii olola kijibaa fi hundee hin qabneen ummata burjaajessuu dhaabuu qabu.
9. ABO fi hoggana isaa irratti karaa adda addaa shira keessaan xaxuuf diraamaa siyaasaa hojjechaa turanii fi ammas itti jiran ummataa fi miseensota ABO biratti saaxilamaa waan ta’eef irra deddeebi’ee fashala’aa ture. Gara fuula duraattis ABO bifa fedheenu laamshessuu waan hin dandeenyeef abdii kutataa fuula isaanii gara dhugaa, nagaa fi dimokraasiitti fuulleffatuu duwwaatu murteessaa akka ta’e dhaamna.
10. Hawaasni aduunyaa bara irraa baratti biyya Ethiopia akka gombisaa hin guutneetti gargaarsa taasisuun mootummaa farra dimokiraasii fi nagaa ta’e suphaa waggoota 100 ol jiraachiseera. Amma gara fuula duraatti tokkummaa hawaasa Oromoo fi sabaa fi sablammiin guutuu adduunyaa irratti bahuun biyyooti alaa mootummooti Ethiopia dhufaa darbaa farra ummataa fi dimokraasii ta’uu saaxiluuf itti fufinsaan ni hojjetama. Mootummaanis kana hubatee yoo gochaa isaa kana irraa of hin qusanne maraammartoo siyaasaa qabameen akka dhabamu akeekkachiisna.
ከአብይ ጀርባ ያለው ሃይልና አላማው /08/01/2020].